Ny mpamorona an'i Mafalda, Quino, dia mamela antsika 88 taona | Famoronana an-tserasera
Androany dia hisy lohateny maro izay mahatadidy ny iray amin'ireo lehibe amin'ny sary Espaniola, Quino. Ny mpamorona an'i Mafalda dia mamela antsika amin'ny faha-88 taonany Miaraka amina asa tsy mampino sy ilay mpihetsiketsika teraka tamin'ny dokambarotra ho an'ny fitaovana Mansfield.
Raha ny marina, io marika io ihany no nanary ny Tantara an-tsary nataon'i Quino manokana ka tamin'ny 1964 avereno ny toetra amam-panahy hahatonga azy ho ankehitriny, iray amin'ireo olona tiana indrindra sy andrasan'ny maro.
Noforonin'i Quino i Mafalda hitondra azy any amin'ny gazety Front Page ary hamadika azy io ho andalana mahomby indrindra amin'ny fiteny espaniola. Ary miresaka toetra iray izay azy isika ny tantara an-tsary dia nadika tamin'ny fiteny 30 mahery.
Teraka tany 17 Jolay 1932 tao Mendoza (Arzantina), ary ao amin'io tanàna nonenany io ihany mandra-pahafatiny. Sariitatra iray izay niaraka tamin'ny zazavaviny no namaly an'i Mafalda fa nahasarika olona ary mbola manintona olona an-tapitrisany maro.
Avy amin'ny fianakaviana manetry tena, ny ray aman-dreniny Espaniola, avy any Fuengirola (Málaga)Nifindra monina tany Arzantina izy ireo tamin'ny taona 30; raha ny marina, Joaquín Lavado dia niteny Andalusianina hatramin'ny faha-6 taonany.
Taorian'ny tantara an-tsary miresaka an'i Mafalda dia tamin'ny 1973, miaraka amina tadiny 1.928, rehefa nanapa-kevitra i Quino fa tsy hanao sary an'i Mafalda intsony taorian'ny faharerahana niaretany tamin'ny toetra amam-panahy ary ny fikirizany nanoritra tady ho an'ny gazety. Nandeha tany amin'ny Firenena izy izay nitaomany hafatra ara-tsosialy bebe kokoa ary naneho ny famoretan'ny fahefana.
Tsy nisy afaka nampangina ny feon'i Mafalda tao Quino na amin'ny vignette ho avy. Fahaverezana lehibe ho an'ny sary sy Mafalda izay mamela antsika amin'i Quino sy ireo tantara an-tsary an'arivony izay tsy namelany ny saribakoly tsy nanan-doha.
Avy eto amin'ny Creativos Online dia te handoa hetra izahay miaraka amin'ny veloma ary famihinana avy lavitra noho ny fikomiany sy ny sainy feno hafetsena ary manao sary miaraka amin'i Mafalda mandrakizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Maty tamin'ny faha-88 taonany i Quino, mpamorona an'i Mafalda
Adobe dia manolotra ny Photoshop Elements 2021 sy ny Premiere Elements 2021 miaraka amin'ny lantom-peony ao amin'ny Adobe Sensei